Umgangatho wemveliso yezichumiso eziqulathe iitoni ezingama-50- YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Isichumisi esihlanganisiweyo, esikwabizwa ngokuba sisichumisi semichiza, sisichumiso esinezichumisi ezimbini okanye ezintathu zezakha-mzimba zezityalo, ezinjenge-nitrogen, i-phosphorus kunye ne-potassium, edityaniswe kukungqubana kwemichiza okanye iindlela zokuxuba; Izichumisi ezimbaxa zinokuba ngumgubo okanye igranular. Isichumisi esidityanisiweyo siqulathe izithako ezisebenzayo eziphezulu, kulula ukuba unyibilike emanzini, sibola ngokukhawuleza, kwaye kulula ukufunxwa yingcambu. Ke ngoko, ibizwa ngokuba "sisichumisi esisebenza ngokukhawuleza". Umsebenzi wawo kukuhlangabezana nemfuno ebanzi kunye nokulingana kweendidi zezondlo kwiimeko ezahlukeneyo zemveliso.
Umgca wemveliso yonyaka weetoni ezingama-50 000 zesichumisi esidityanisiweyo yindibaniselwano yezixhobo eziphambili. Iindleko zemveliso azisebenzi. Imveliso yemveliso yesichumiso ingasetyenziselwa i-granulation yezinto ezahlukeneyo zokwenza izinto. Okokugqibela, izichumisi ezihlanganisiweyo ezinee-concentrations ezahlukeneyo kunye neefomula zinokulungiswa ngokweemfuno zokwenyani, zizalise ngokufanelekileyo izondlo ezifunekayo kwizityalo, kwaye zisombulule ukungqubana phakathi kwemfuno yesityalo kunye nonikezelo lomhlaba.
Imveliso edityanisiweyo yemveliso yesichumiso isetyenziselwa ikakhulu ukuvelisa izichumisi zeefomula ezahlukileyo ezifana ne-potassium s nitrogen, i-phosphorus potassium perphosphate, i-potassium chloride, i-granular sulfate, i-sulfuric acid, i-ammonium nitrate kunye nezinye iifomula ezahlukeneyo.
Njengomvelisi oqeqeshiweyo wemveliso yezixhobo zokuchumisa, sinika abathengi izixhobo zemveliso kunye nesona sisombululo sisiso kwiimfuno zamandla emveliso ezahlukeneyo ezinje ngeetoni ezingama-10,000 ngonyaka ukuya kwiitoni ezingama-200,000 ngonyaka. Iseti epheleleyo yezixhobo icwecwe, inengqiqo kwaye iyinzululwazi, ngokusebenza okuzinzileyo, ukusebenza kakuhle kokonga umbane, iindleko zokugcina eziphantsi kunye nokusebenza okufanelekileyo. Olu khetho lolona khetho lufanelekileyo kubavelisi bezichumisi ezixubileyo.
Umgca wemveliso yezichumiso ezidityanisiweyo unokuvelisa isichumiso esiphakamileyo, esiphakathi kunye nesisezantsi kwizichumiso ezahlukeneyo. Ngokubanzi, isichumisi esidibeneyo siqulathe ubuncinci izondlo ezibini okanye ezintathu (i-nitrogen, i-phosphorus, i-potassium). Inempawu zomxholo ophezulu wezondlo kunye neziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa. Isichumisi esihlanganisiweyo sidlala indima ebalulekileyo kuchumiso olungeleleneyo. Ayikwazi ukuphucula kuphela ukusebenza kakuhle kwezichumiso, kodwa ikwakhuthaza isivuno esizinzileyo kunye nesiphezulu sezityalo.
Ukusetyenziswa komgca wemveliso yezichumiso zemveliso:
1. Inkqubo yokuvelisa i-urea yesalfure-baged.
2. Iinkqubo ezahlukeneyo zemveliso yezichumisi zezinto eziphilayo nezingaphiliyo.
3. Inkqubo yesichumisi esine-asidi.
4. Inkqubo yomgquba wezinto ezingaphiliyo kwimizi-mveliso.
5. Inkqubo yokuvelisa i-urea enkulu.
6. Inkqubo yokuvelisa isichumiso sematriki kwizithole.
Izinto ezikhoyo zokwenza imveliso yezichumiso eziphilayo:
Izinto ezingafunekiyo zomgca wokuvelisa isichumiso somdibaniso yi-urea, i-ammonium chloride, i-ammonium sulphate, i-ammonia engamanzi, i-ammonium phosphate, i-diammonium phosphate, i-potassium chloride, i-potassium sulphate, kubandakanya udongwe kunye nezinye izinto ezizalisayo.
Imveliso edityanisiweyo yemveliso yesichumiso ejikelezayo igubu legrum isetyenziselwa ukuvelisa isichumiso esine-high-concentration compound. I-disk granulation ingasetyenziselwa ukuvelisa iteknoloji ye-high-and-low-concentration ye-teknoloji, idibaniswe ne-teknoloji ye-anti-congested technology, i-nitrogen ephezulu ye-teknoloji yokuvelisa isichumisi, njl.
Umgca wemveliso yemveliso yesichumiso kumzi-mveliso wethu unezi zinto zilandelayo:
Izinto ezisetyenziswayo zisetyenziswa kakhulu: izichumisi ezimbaxa zinokuveliswa ngokweefomula ezahlukeneyo kunye nobungakanani bezichumisi ezimbaxa, kwaye zikulungele ukuveliswa kwezichumisi ezimbaxa nezingaphiliyo.
Elona zinga lincinci le-spherical kunye ne-biobacterium isivuno siphezulu: inkqubo entsha inokufikelela kwinqanaba elingaphezulu kwe-90% ukuya kwi-95%, kwaye itekhnoloji yokomisa umoya obushushu obuphantsi inokwenza ukuba iintsholongwane ze-microbial zifikelele kwinqanaba lokusinda ngaphezulu kwe-90%. Imveliso egqityiweyo intle ngenkangeleko kwaye nangobungakanani, i-90% yayo ngamasuntswana anobungakanani be-particle ye-2 ukuya kwi-4mm.
Inkqubo yabasebenzi ibhetyebhetye: inkqubo yemveliso yemveliso yesichumiso inokulungiswa ngokuhambelana nezinto ezikhoyo, ifomula kunye nendawo, okanye inkqubo elungelelanisiweyo inokuyilwa ngokweemfuno zabathengi.
Umyinge wezakhamzimba zeemveliso ezigqityiweyo zizinzile: ngokulinganisa okuzenzekelayo kwezithako, umlinganiso ochanekileyo wezinto ezahlukeneyo eziqinileyo, ulwelo kunye nezinye izinto ezingafunekiyo, phantse ukugcina uzinzo kunye nokusebenza kwesondlo ngasinye kuyo yonke inkqubo.
Inkqubo yokuhamba komgca wemveliso yezichumiso ezidityanisiweyo zihlala zingahlulwa zibe: izinto ezingavuthiweyo, ukuxubana, ukutyumza amaqhuqhuva, igranulation, ukuhlolwa kokuqala, ukomisa kwamasuntswana, ukupholisa amasuntswana, ukuhlolwa kwesekondari, ukugqitywa kwamasuntswana agqityiweyo, kunye nokupakishwa kobungakanani beemveliso ezigqityiweyo.
Ngokwemfuno yentengiso kunye neziphumo zokumiselwa komhlaba, i-urea, i-ammonium nitrate, i-ammonium chloride, i-ammonium thiophosphate, i-ammonium phosphate, i-diammonium phosphate, i-calcium enzima, i-potassium chloride (i-potassium sulphate) kunye nezinye izinto ezisasazwayo zisasazwa kwinxalenye ethile. Izongezo, ukulandelela izinto, njl njl. Zisetyenziswa njengezithako kwinxalenye ethile ngezikali zebhanti. Ngokomyinge wefomyula, zonke izinto zokwenza izinto ezingafunekiyo zihamba ngokulinganayo ukusuka kumabhanti ukuya kubxube, inkqubo ebizwa ngokuba ziipremixes. Iqinisekisa ukuchaneka kokuqulunqwa kwaye ifezekise izinto ezifanelekileyo eziqhubekayo.
Amaqhuma kwi eziphathekayo batyumke emva ukuxubeka ngokulinganayo, nto leyo elula ukuba processing granulation elandelayo, ikakhulu usebenzisa isityumzi isityumzi.
Izinto emva kokuxubeka ngokulinganayo kunye nokutyunyuzwa zithunyelwa kumatshini wegranulation ngokusebenzisa ibhanti yokuhambisa ibhanti, eyinxalenye ephambili yomgca wemveliso yezichumiso. Ukukhetha i-granulator kubaluleke kakhulu. Umzi-mveliso wethu uvelisa i-disk granulator, i-drum granulator, i-roller extruder okanye i-granulator yecomputer.
Amasuntswana ayacocwa, kwaye amasuntswana angafanelekanga abuyiselwa kukuxuba okuphezulu kunye nokukhuthaza ikhonkco lokuphinda kusebenze. Ngokubanzi, kusetyenziswa umatshini we-roller sieve.